१ diabetes मधुमेह अनुप्रयोगहरू तपाईंको स्वास्थ्य प्रबन्ध गर्न - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कल्याण कम्पनी स्वास्थ्य समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण खेलहरु घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> १ diabetes मधुमेह अनुप्रयोगहरू तपाईंको स्वास्थ्य प्रबन्ध गर्न
१ diabetes मधुमेह अनुप्रयोगहरू तपाईंको स्वास्थ्य प्रबन्ध गर्न
यी अनुप्रयोगहरू भविष्य हुन्। न्यू जर्सीको एपेक्स हार्ट र भास्कुलर केन्द्रका एक अन्तर्क्रियात्मक हृदय रोग विशेषज्ञ एमडी, अनुज शाहले मधुमेह अनुप्रयोगहरूको बारेमा भनेको कुरा यही हो। डा। शाह धेरै चिकित्सा पेशेवरहरू मध्ये एक हुन् जसले स्मार्टफोनमा आधारित मधुमेह ट्र्याकरहरू सर्तका साथ जीवनका लागि उपयोगी उपकरणको रूपमा हेर्छन्।
विशेष गरी COVID को समयमा, टाढाबाट चीजहरू निगरानी गर्न यति ठूलो आवश्यकता छ कि, डा शाह भन्छन्। हामी मानिसहरुको रक्तचाप, उनीहरुको मुटुको दर रिमोट बाट प्रबन्ध गर्न कोशिस गरिरहेका छौं। डायबेटिज अर्को ठूलो फ्रन्टियर हो जहाँ हामी रगतको चिनी रिमोट व्यवस्थापन गर्न सक्दछौं। अनुप्रयोगहरूमा धेरै क्षमता हुन्छ।
तर यति धेरै विकल्पहरू - र थोरै नियमनको साथ - कुन मधुमेह अनुप्रयोग प्रयोग गर्न लायक छ भनेर जान्न गाह्रो हुन सक्छ। क्लिभल्यान्ड क्लिनिक डायबिटीज सेन्टरका क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायना आइज्याक्स, फर्म.डी भन्छन, एप्सले एफडीए मार्फत जानु पर्दैन। यदि अनुप्रयोग त्रुटिपूर्ण छ र व्यक्तिलाई धेरै वा धेरै थोरै [इन्सुलिन] लिन भन्छ भने त्यसले हानि गर्न सक्छ।
डा। आइसाक्स थप्दछन् कि स्मार्टफोन अपडेटहरू पनि चिन्ताको कारण हो। त्यहाँ सँधै नयाँ संस्करण हुन्छ र यसको साथमा यसले बगतर्फ डोर्‍याउँछ। हामीलाई एक समन्वित प्रयास चाहिन्छ।
छाला मा खमीर संक्रमण को लागी प्राकृतिक उपचार
सबै चीजहरू विचार गरीन्छ, त्यहाँ केहि मधुमेह अनुप्रयोगहरू छन् (एप्पल आईफोन वा एन्ड्रोइडका लागि) जुन उनीहरूको काम सही गर्दछ। यहाँ १ 15 छन् जुन बिरामीहरु आफ्नो अवस्था ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्, मधुमेह भएका मानिसहरुको समुदायसँग जोड्न, औषधीमा मूल्य तुलना गर्नुहोस् , र अधिक।
१ diabetes मधुमेह अनुप्रयोगहरू
१. डेक्सकॉम स्पष्टता
विशेष उत्पादहरूको साथ जान सक्ने अनुप्रयोगहरू धेरै राम्रा हुन्छन्, डा। इसहाकहरू भन्छन्। उदाहरण को लागी, म धेरै CGMs [निरन्तर ग्लूकोज मोनिटरहरू] प्रयोग गर्छु। त्यहाँ चार कम्पनीहरू छन् जुन व्यक्तिगत CGM हरू छन् र ती सबैसँग यसको एक अनुप्रयोग सम्बन्धित छ।
Dexcom G6 ती CGM हरू मध्ये एक हो, र यसको सम्बन्धित मधुमेह अनुप्रयोग Clarity भनिन्छ।
स्पष्टता बिरामीहरुलाई दिनको रगत ग्लूकोज स्तर दायरा मा पैटर्न खोज्न मद्दत गर्दछ। यदि प्रयोगकर्ताको रगत ग्लुकोजको स्तर कम छ भने अलार्म बन्द हुन्छ, र यसले प्रियजनहरू (आमा बुबाजस्तै) को फोनमा पनि जडान गर्दछ। यो सम्भव छ औंलाको चुचुरो बिना।
को रूप मा को रूप मा, तपाईं अलार्म बन्द गर्न सक्नुहुन्न — त्यसैले यो सार्वजनिक सेटिंग्स मा एक अलि घुसपैठ हुन सक्छ। तपाईलाई आफ्नो फोनमा पर्याप्त भण्डारण पनि चाहिन्छ। जहाँसम्म, धेरैको लागि, सुरक्षाको भावना यसको लायक छ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
सुगरब्रेक मधुमेह र प्री-डायबिटीज दिमागमा भएकाहरूका लागि सिर्जना गरिएका उत्पादहरूको एक रेखा हो। यो रगतमा चिनी कम गर्न, ग्लुकोजको स्तर स्थिर गर्न, र चिनी लालसा कम गर्न प्रभावी छ। सम्बन्धित CGM र ग्लूकोज अनुप्रयोग तपाइँ पछाडि ट्र्याक र आफ्नो प्रगति निगरानी गर्न दिन्छ। सुगरब्रेक पूरै मेडिकल बोर्ड द्वारा समर्थित छ, डा। टोम हिलडेब्रान्ड सहित,माउंट सिनाईमा खाने र तौलका विकारका बिभाग प्रमुख। को बारे मा अधिक खोज्नुहोस् आईफोन-मिल्दो मधुमेह ट्र्याकर यहाँ ।
शुगर.आईक्यू डायबिटीज सहायक अनुप्रयोग मेडट्रोनिक गार्जियन कनेक्ट सीजीएमको साथ संयोजनको रूपमा काम गर्दछ मानिसहरूलाई ग्लुकोज डाटा र अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। तपाइँले तपाइँको CGM डेटा डिकोड गर्न मद्दत गर्ने प्रवृतिको जानकारीका साथ घण्टामा तथ्या .्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। Sugar.IQ हाल आईफोन प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store ।
MySugr लोकप्रिय छ - यस संग2मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु छन्, र प्रयोगकर्ता समीक्षा द्वारा 7.7 स्टार मूल्या stars्कन गरिएको। र एक कारणको लागि। यसको कार्यक्षमता विशाल छ। जब रगतमा चिनी मिटरमा जडान हुन्छ, यसले सजिलै बुझ्न को लागी रिपोर्टहरू, निजीकृत लगि ,्ग, अनुकूलित चुनौतीहरू, अनुमानित HbA1c स्तर, र अधिक प्रदान गर्दछ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
संकेत तपाइँको मुटु बाहिर छ
One. एक ड्रप मधुमेह व्यवस्थापन
वन ड्रप डायबिटीज व्यवस्थापन अनुप्रयोग फरक छ किनकि यसले सर्टिफाइड डायबिटीज शिक्षकहरूबाट प्रत्यक्ष मद्दत प्रदान गर्दछ। यो ब्लुटुथ सक्षम ग्लूकोमिटरको अतिरिक्त हो जुन मधुमेह ट्र्याकर सफ्टवेयरको साथ जोडी छ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
H. हिडियाको हो
जब तपाईंको रगत ग्लुकोज मिटरमा जोडिएको छ, हिडिया अनुप्रयोगले कार्ब सेवनको विश्लेषण गर्दछ, इन्सुलिन खुराक सिफारिश गर्दछ, रगतमा चिनीको स्तर ट्र्याक गर्दछ, र नियमन गर्ने बेला अनुस्मारकहरूको साथ प्रयोगकर्ताहरूलाई धक्का दिन्छ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
डा। आइज्याकका अनुसार, सबैभन्दा उपयोगी मधुमेह ट्र्याकरहरू प्रयोगकर्ता मैत्री हुन्। एप्सलाई धेरै आगत आगत आवाश्यक हुन्छ, जस्तै उनीहरूको सबै खाना र क्यालोरीहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्, ती बाहिर चम्कन्छन् किनभने मानिसहरू थकित हुन्छन्, उनी भन्छिन्।
ग्लोको एक त्यस्तो अनुप्रयोग हो जुन यसको प्रयोगकर्ता मित्रताको घमण्ड गर्दछ। यसले तपाइँलाई तपाइँको मिटर, इन्सुलिन पम्प, वा CGM बाट डेटा एक ठाउँ मा सिंक गर्न दिन्छ, ताकि तपाइँ तपाइँको हेरचाह टोलीलाई तपाइँको अवस्थाको समग्र दृष्टिकोण प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। यो Fitbit र अन्य लोकप्रिय फिटनेस ट्रैकरहरूसँग सजिलो खाना र गतिविधि सिc्कको लागि पनि उपयुक्त छ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
Fitbit को कुरा गर्दा, यो उपकरण र अनुप्रयोग मधुमेह भएका व्यक्तिहरूका लागि उत्कृष्ट छ जसले आफ्नो वजन र शारीरिक गतिविधि ट्र्याक गर्न खोजिरहेका छन्। Fitbit ले मुटुको दर परिवर्तनशीलता ट्र्याक गर्न सक्दछ। डा। शाहका अनुसार यो महत्वपूर्ण छ किनकि यसले मेडिकल पेशेवरहरुलाई प्रश्नहरूको उत्तर दिन सहयोग गर्दछ, जो जोखिममा छ? को धेरै तनाव अन्तर्गत छ? हामी यसको बारेमा के गर्न सक्छौं?
जब तपाईं समग्र दृष्टिकोणबाट मधुमेहलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यो सबै कुराको महत्त्व राख्छ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
आर्मर सिर्जना अन्तर्गत, MyFitnessPal अनुप्रयोग मधुमेह भएका व्यक्तिहरूका लागि राम्रो छ किनकि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक सरल प्लेटफर्मबाट निर्बाध रूपमा तिनीहरूको भोजन प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ - र रगत चिनीलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि उचित आहार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदमहरू हुन्। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
आदत एक चिकित्सकद्वारा स्थापित टाइप २ मधुमेह छुटकारा कार्यक्रम हो, र साथमा जानका लागि एक अनुप्रयोग छ। स्वास्थ्य ट्र्याकिंग अनुप्रयोगले सुरुवातबाटै टाइप २ मधुमेह उल्ट्याउन उपयुक्त जीवनशैली कायम राख्न मद्दत गर्दछ। तपाईले मधुमेह अनुप्रयोग प्रयोग गरी तपाईको वजन घटाउने र समग्र स्वास्थ्यको प्रवृत्ति पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ, अन्तत: तपाईलाई के काम गर्छ र के गर्दैन भनेर पत्ता लगाउन। अनुप्रयोग प्रोग्रामको साथ, यस्तै एक निःशुल्क टाइप २ मधुमेह मूल्यांकन को साथ शुरू सामान्य वेबसाइट ।
११. भिडा स्वास्थ्य
भिडा हेल्थले व्यक्तिहरूको लागि बोइing, भिसा, र इबे जस्तै ठूला रोजगारदाताहरूका लागि डिजिटल मधुमेह व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। समग्र स्वास्थ्य अनुप्रयोगसँग रोग व्यवस्थापन र रोकथामका साथै सीओपीडी व्यवस्थापन, कोलेस्ट्रोल ट्र्याकिंग, निन्द्रा स्वास्थ्य, र तनाव लचिलोको लागि सुविधाहरू छन्। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
प्राविधिक रूपमा अनुप्रयोग होईन भने डायबेटिभिज एक मोबाइल-अनुकूलित अनलाइन हब हो जुन स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिनका स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीले निर्माण गरेको हो। यसको मूलमा, यो एक उपकरण खोजीकर्ता हो कि मधुमेह भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत रोग व्यवस्थापनको लागि उत्तम टेक्नोलोजीको साथ खोज्दछ। यो नि: शुल्क हो, कथित पक्षपात नगरिएको, र जो कोही टाइप १ मधुमेह वा टाइप २ मधुमेहको लागि इन्सुलिन लिनेको लागि काम गर्दछ। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई जडान गरिएको अनुप्रयोगको साथ उपकरण फेला पार्न मद्दत गर्दछ जसले तपाईंको सबै बक्सहरू जाँच गर्दछ।
डा। आइसाक्सले पूर्ण रूपमा डायबेटिज टेक्नोलोजीको बारेमा भनेको छ, १०% मानिसहरूलाई मधुमेह छ — यस ज्ञानमा मद्दत गर्ने धेरै मानिसहरू छन्। तिमी सक्छौ मा उपकरण खोजक प्रयोग गर्नुहोस् डायबेटिसियस वेबसाइट ।
ग्लुकोज बडी अनुप्रयोग एक ट्र्याकि tool उपकरण हो जसले तपाईंलाई रगत चिनी पढाई, ईन्सुलिन (वा अन्य औषधीहरू), र खाना लग गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसो भए, यो जानकारीलाई चार्टमा रूपान्तरण गर्दछ ताकि तपाईं सजिलै आफ्नो रोग व्यवस्थापनमा ट्रेंडहरू देख्न सक्नुहुनेछ। थप, तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूको सहयोगी समुदायमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुन्छ, र मधुमेहलाई कसरी राम्रोसँग बुझ्नको लागि शिक्षा जारी राख्नुहुन्छ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
मधुमेह प्रबंधन प्लेटफार्म (DMP) एक नि: शुल्क अनुप्रयोग हो जुन मधुमेहका साथ मान्छेहरूको लागि एक सामाजिक मिडिया नेटवर्क जस्तै छ। जबकि यो पारम्परिक अर्थमा मधुमेह ट्र्याकर होईन, यसले तपाईंलाई समान प्रकारको मधुमेह भएका व्यक्तिहरूसँग उडान गर्दछ, समान उमेर दायरा भित्र, वा समर्थन प्रदान गर्न सर्तको सम्बन्धमा उस्तै मुद्दाहरूको साथ। मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
सम्बन्धित: कार्बोहाइड्रेट के हो?
मधुमेह औषधी महँगो हुन सक्छ। को अमेरिकामा मधुमेह हेरचाहको औसत लागत २ 26% बढ्यो २०१२–२०१ from देखि, २०१ Di मा मात्र total7billion7 बिलियन डलर, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (एडीए) का अनुसार। प्रिस्क्रिप्शन औषधिहरू यसको 30०% को लागि जिम्मेवार छ।
को एकलकेयर अनुप्रयोग नि: शुल्क हो र तपाईलाई देशभरीमा ,000 35,००० फार्मेसीमा लागत तुलना गर्न मद्दत गर्न सक्दछ, अन्तत: तपाईलाई मधुमेह औषधी पुर्‍याउन सहयोग गर्ने मा डाउनलोड गर्नुहोस् App Store र गुगल प्ले ।
उत्तम मधुमेह अनुप्रयोग कसरी छनौट गर्ने
जब मधुमेह अनुप्रयोग छनौट गर्न र प्रयोग गर्ने कुरा आउँछ, डा। शाहले हामीलाई याद दिलाउँदछ कि अनुप्रयोगहरू ठूलो सम्भावित उपकरणहरू हुन्, तर यो वास्तवमा तल आउने कुरा आफै हो।
के तपाइँ एक घण्टा चाँडै औषधि लिन सक्नुहुन्छ?
यसको लागि चाहिने कुरा प्रेरणा हो, उनी भन्छन्। मधुमेहले शाब्दिक रूपमा शरीरमा प्रत्येक अ system्ग प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ। हामीसँग धेरै उपकरणहरू छन् जब कोही प्रेरित हुन्छन्।
जेसुकै मधुमेह ट्र्याकरले तपाईलाई लागू गर्न रोज्नुहुन्छ भन्ने कुराको फरक पर्दैन, तपाईको स्वास्थ्य अवस्था प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् कुनै अनुप्रयोगमा निर्णय गर्नु अघि तपाईको निश्चित अवस्थाको लागि यो सहि र सहयोगी छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
डा। आइज्याक्सले हामीलाई सम्झाएझैं, मधुमेह अनुप्रयोगहरूको लागि कुनै नियमनिय निरीक्षण छैन, र तिनीहरू १००% शुद्ध छैनन्। तपाईंले अझै पनि आफ्नो ग्लूकोज मोनिटरमा भरोसा राख्नुपर्दछ र तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई व्यावसायिक चिकित्सा सल्लाहका लागि भ्रमण गर्नुहोस् यदि तपाईंको लक्षणहरू बिग्रेको छ भने।
अशक्त मानिसहरूका लागि औषधि व्यवस्थापन
तपाइँ काउन्टर मा mucinex किन्न सक्नुहुन्छ
एप्पल साइडर सिरका पिउन के मद्दत गर्दछ
मेक्सिको मा नुस्खा औषधि कसरी प्राप्त गर्ने
कति समय पछि सेक्स योजनाbकाम गर्दछ
मधुमेह को लागी एक राम्रो a1c नम्बर के हो
के म उही दिन योजना बी लिन सक्छु